Wax walba oo ku saabsan Clomid
1. Waa maxay Clomid? Sidee u shaqeysaa? 2. Isticmaalka Clomid
3. Qiyaasta xajmiga 4. Natiijooyinka Clomid
5.Clomid Half-Life 6. Saameynada Dhibaatooyinka
7. Dheefaha Clomid 8. Dib u eegisyada Clomid
9. Iskuxidhka iibka 10. Isku dhejinta si loo daaweeyo dhalmo la'aanta dheddig-(Guud)
Waa maxay Clomid? Sidee u shaqeysaa?
Citrate-ka Clomiphene ayaa sidoo kale loo yaqaan Clomid (50-41-9), waa dawo afka ah oo loo isticmaalo daawaynta noocyada dhalmada gabdhaha gaar ahaaneed. Guud ahaan waxaa lagu iibiyaa magacyo kala duwan sida Clomidac, clomene, Bemot, Clomi, clomifen, Beclom, Blesifen, Biogen, Blesifen, Chloramiphene, ClomHEXAL, et al. Isticmaalkeeda waxaa la ansixiyey laguna taliyay isticmaalka caafimaadka ee 1967 ee USA. Nidaam kasta oo caafimaad ayaa u baahan daawadan ugu haboon ee ugu waxtarka leh sida ku cad liiska Daawooyinka Aasaasiga ah ee Ururka Caafimaadka Adduunka. Waxaa laga helaa daawooyinka guud. Clomid wuxuu ka mid yahay noocyada kala duwan ee soo saarista ugxan-la'aanta ah ee haweenka aan khatarta lahayn sababtoo ah oligo-qoynta.
Daawada waxay u shaqeysaa habka jidhku u maleynayo in heerarka estrogen uu hooseeyo oo sidaas darteed keena qanjirada pituitary si loo xoojiyo hoormoonka luteining LH ama follicle stimulating hormone kale oo loo yaqaan quudinta FSH. Heerarka FSH ee sareeya waxay kiciyaan ugxan-yari si ay u yeeshaan mid ama tiro badan oo ah bacaha ukunta la soo saaray kaas oo la sameyn doono ama lagu soo saarayo ugxan-sidaha. Dhanka kale, heerarka sare ee LH waxay kiciyaan ugxantu.
Clomid (50-41-9) waxay ahayd mid aad u wanaagsan oo ka mid ah dadka waayeelka ah ee da'doodu ka wayntahay konton sano oo dhakhaatiirta gargaarka caafimaadka ah ama OB-GYNs waxay caadi ahaan qoraan citrate xayawaanka ka hor inta aanay u gudbin hal ama laba si ay u hubiyaan takhasuska bacriminta ee daryeel dheeraad ah oo khaas ah. Qaar ka mid ah takhasusayaasha wax soo saarka ayaa sidoo kale ciriiriya citrate. Daawadan laguma talin karo haweenka ugxan-yare ah ee ugxan-abuurka ah si toos ah uguma abuuri karo ukunta (fayruuska hoose ama qanjidhada jinsiga).
Cudurka dabiiciga ah, dhiigbax la'aanta, amenorrhea, amenorrhea, amnorrhea secondary, galactorrhoea, syndrom of polycystic ovary, Chiari-Frommel malady, maqaarka unugyada steroid la'aan, oligospermatism, ogaanshaha xanuunka gonadotrophic ee ka shaqeeya qanjirada endocrine. Caadiga Clomiphene ayaa badanaa faa'iido u leh kuwa isku dayaya inay ku dhiirigeliyaan hay'adda uurka leh Qaramada Midoobay inay ka mid tahay dhibaatooyinka soo socda:
Qummanaan aan caadi ahayn: waa wax dhib badan oo uur ah marka haweenta wareegga dumarka sidaas awgeed aaney isku dhicin in aanay hubin marka ay soo baxdo. Marka ay waxtarkeeda waxtarkeeda, isticmaalka cagaarka clomiphene waa in uu soo saaraa jawaab celin si qoto dheer leh u oggolaaneysa inuu si joogto ah isu galmoodo ama uurjiifin.
Dhibaatada bacriminta: mar haddii uu jiro tangle tayada jidhka dareeraha ah, sida caadiga ah dhakhtarkaaga caafimaad ayaa kuu soo jeedin kara dulin-ka-bixinta intrauterine si loo siyaadiyo rajada jidhka. Caadiga Clomiphene waxaa badanaa la caanbaxay si uu u fududeeyo habeynta wakhti-gaaban ee naas-nuujinta iyada oo la socota wareegga haweenka.
Calaamadaha aan macquul ahayn: caado-qoyseedka clomiphene waxaa lagu muujiyay in ay tahay mid waxtar u leh kor u qaadista heerarka xaaladaha jireed ee lammaanaha dhallinyarada ah ee caafimaad qaba ee haystay falanqayn bini-aadminimo oo caadi ah, hase yeeshe si kastaba ha ahaatee qaybta degaanka ee heysata helitaanka uur.
Laguma talin in la sameeyo baaritaanka ultrasound si looga saaro wax kasta oo muhiim u ah qanjidhada galmada ee sii hagaagsan inta aan la gelin wareega daaweynta cusub.
Clomifene ayaa si wadajir ah loogu isticmaalay tiknooloji kala duwan oo loo adeegsado si loo kordhiyo heerarka guusha ee hababka kala duwan
Clomifene waxaa sida caadiga ah loo adeegsadaa daaweynta eunuchoidism oo kale oo ah hoormoon hormoon ah oo bedeleysa daryeelka caafimaadka.
Foomka dawada: Kiniin NDC 0068-0226-30: Kiniinada 50 mg ee kartoonada soddon
Jadwalayaashu waxay ku yaalaan jumlada, caddaan, dhibcaha, iyo quudinta clambigeeda konton.
Kiniinka ku kaydi heerkulka xukunka 59-86 ° F (15-30 ° C). Shield ka soo kulaylka, iftiinka, iyo qoyaanka xad dhaafka ah, oo ku kaydi weel xiran.
Shaqada iyo daaweynta musharaxiinta daaweynta citrate ee clomiphene waa in ay kormeeraan dhakhaatiirta waayeelka ah ee maareynta takhasuska caafimaadka ama cudurada halista ah. Bukaan-socodka waa in loo doortaa daryeel caafimaad oo leh xayawaanka caloosha oo keli ah marka la fiiriyo falanqaynta ciladda. Diyaargarowga daryeelka caafimaadka waa in la daabaco kahor. Maqnaanshaha si loo gaaro hadafka daryeelka caafimaadka waa in laga reebo ama si habboon loo daweeyo ka hor inta aanad bilaabin citrate-koodh. Ujeedada daaweynta waa in la isku dheellitiraa khatarta iman karta iyo la xariirta bukaanka. ka welwelsanaanta ficil ahaanta xaalad jireed.
Daaweynta bukaanka la doortay waa in ay bilaabaan, qiyaasta qaxwada, konton mg maalintii (1 kiniiniga) shan maalmood. Qiyaasta waa in la buunbuuniyo oo keliya bukaanada bukaan socodka ah ee Qaramada Midoobey ma yiraahdo ka jawaab celinta cawska konton mg mg cumrimin leh. Cunto qadar ah ama dhererka koorsada daaweynta ayaa si gaar ah loola taliyaa haddii xasaasiyad aad u daran u leh hoormoonka pituitary looga shakisan yahay, sida bukaanka qaba cudurka kansarka ugxanta.
Bukaanku waa in lagu qiimeeyaa si degdeg ah si looga saaro xaalada jireed, balaarinta qanjirrada, ama qaabka cyst ka mid ah wareegga daaweynta.
Haddii dhiigbaxa progestin-ku-dillaacay la qorsheeyey, ama haddii haweenayda uur-ku-jirka ah ee taranka ee dhacdooyinka gudaha ku dhacdo kahor intaan la daaweynin, barnaamijka konton mg maalintii shan maalmood waa in la bilaabo ama ku saabsan maalinta shanaad ee wareegga. Daryeelka caafimaadka ayaa sidoo kale la bilaabi karaa wakhti kasta gudaheeda hay'adda bukaanka ee Qaramada Midoobey ma lahan dhiigbax cusub oo xubinta taranka haweenka ah. Marka geedi socodka dabiiciga ah uu dhaco qadarkan, ma jirto wax faa'iido ah oo lagu kordhinayo qiyaasta wareegyada wareegista daaweynta.
Haddii geedi socodka dabiiciga ah uusan u muuqan inuu dhaco marka koorsada koowaad ee daryeelka caafimaadka, koorsada labaad ee boqolkiiba maalintii (laba kiilo konton mg kiniin ah ayaa loo bixiyaa hal qadar maalinle ah) muddo shan maalmood ah waa in ay noqotaa mid khatar ah. Koorsadani waxaa sidoo kale laga bilaabi karaa bilowga soddon maalmood ka hor midkii hore mid ka mid ah wareegga wareegga wareegga si looga fogaado jiritaanka umusha. Kordhinta qiyaasta ama muddada daryeelka caafimaad ee dhinaca fog ee boqol malyan / maalin muddo shan maalmood ah lama talin.
Inta badan dadka bukaanka ah ee hay'adda Qaramada Midoobay ee qorshaynta inay bixiyaan waxay sidaas samayn karaan markaa koorsada koowaad ee daryeelka caafimaadka. Haddii geedi socodka dabiiciga ahi aanu dhicin mar saddex marxaladood oo daryeel caafimaad ah, daaweyn dheeraad ah leh citrifen citrate laguma talin karo sidoo kale waa in bukaanku dib loo qiimeeyaa. Haddii seddexda jawaabcelinta maqaarku soo baxaan, hase yeeshee dhalmada looma helin, daaweyn dheeraad ah looma sheegin.
Maaddaama citrifen citrate ay keeneyso dheecaannada ukunta badan, fursadahaaga helitaanka dhufan (mataano ama saddex mar mar ... marar badan) ayaa kor u kaca. La shaqeynta hay'ada takhasuska bacriminta aqoonta ee Qaramada Midoobey ee Qaramada Midoobey ayaa qeexaysa qiyaasta saxda ah waxay yareysaa fursada sarreynta sarreeya.
IVF waa farsamo kale oo lagu xaddidayo tirada dhalaanka ee hooyada dhalashada si ay u helaan natiijada hooyada / dhallaanka.
Marka ay ku lug leedahay kicinta geedi socodka dabiiciga ah, citrate clamatiga clomiphene waa mid aad u guuleysatay, taasoo keentay in dheecaanka ukunta baaluqo qiyaastii siddeed haween ah hay'adaha Qaramada Midoobay ay isticmaalaan.
Boldenone Undecylenate (Equipoise) Wuxuu Isticmaalaa, Baaskiil, Qaadasho, Jarid, Qashin(Wuxuu furan yahay tabare cusub oo cusub)
Naaqus Nolosha Nolosha
Haddii aad dhowaan joojisey citramiin caarad, waxaa jira fursad aad ku ogaan kartid khibraddaada oo raad ku yeelata saameyn ku yeelanaya maalmo (ama toddobaadyo toddobaad ah) goorta qiyaastaada ugu dambeysa. Dhibaatooyinka ku yimaada cirridka ayaa laga yaabaa in ay kuu horseedaan inaad ka shakisid in caado-qamriga citrate iyo metabolitigiisu ay tahay inuu weli ku jiro nidaamkaaga iyo yaabana in yar ka hor inta aan la tirtirin. Si aad u aragto mudo dheer oo citrate ah oo caado ah waxaa laga yaabaa in ay ku sii socoto amarkaaga, waxaa lagama maarmaan ah in laga fekero waxa ay ka takhalusi karto nolosha nus shan illaa 7 maalmood.
Tani shan ilaa toddoba maalmood oo ka mid ah la tirtiray Isku dhafid nolosha nuska ah waxay qeexaysaa in ay ku dhowdahay ilaa usbuuc dhammaato marka qiyaastaada ugu dambeeya ay ka tirtirto shan boqollood oo ka mid ah qiyaasta citrate ee kiniiniga ah ee wareega. Inaad ogaato in caado-caleenta caado-ka-soo-saarka ah ee aadka u dheeraaday, aad sax u noqon doontid inaad weli ku jirto nidaamkaaga - inkastoo ay tahay toddobaadkii ilaa iyo intii aad qaadatay. Celcelis ahaan, waxay qaadan doontaa inta u dhaxaysa toddoba iyo toddoba. 5 iyo 38.5 si loo baabi'iyo citrate kumbiyuutarka ee nidaamkaaga oo dhan; qiyaastii afar ilaa lix toddobaad
Warbixinno kale oo dukumiinti ah ayaa sheegaya in barnaamijka Clomid uu kudhowaad yahay qiyaastii laba toddobaad (14 maalmo), taas oo macnaheedu yahay in citrifenka citrate laga yaabo in uu ku hayo nidaamkaaga illaa kow iyo toban usbuuc mar qiyaastaada ugu dambeysa. Isticmaalayaasha intooda badan waa inay filanayaan inay caado-qandhiciladu ku socdaan wareegga u dhaxeeya hal iyo saddex bilood goorta daaweyntooda ugu dambeeya. Waa in la ogaadaa in citrate-koodhku uu ka kooban yahay isugeyn badan oo kala duwan: clomiphen (~ 62%) iyo zuclomiphene (~ 38%).
Kala saarida nus nus ee kemikaalka kiimikaadada kumbuyuutarka ayaa lagu xisaabin karaa afar iyo labaatan saacadood, halkaasoo kiimikada kiimikada kiimikada zuclomiphene ay aad u dheer tahay. Qaybta clomiphene ayaa la ciribtiray, laakiin hal todobaad, halka qaybta zuclomiphene ay masuul ka tahay muddada dheer ee Clomid. Zuclomiphene waxay u muuqataa qulqulada plasma ilaa hal bil ah gabagabada citrate ee kiniinka cawska ah iyo raadadka qiyaasaha waxaa lagu soo warramaa qashin aan nadiif ahayn hal mar nus digrii
Inkasta oo clomiphene ay ku jirto wareegga wareegga afar illaa toban iyo toban toddobaad kaddib marka qiyaasta ugu dambeysa ee isticmaalaha isticmaalkeeda, ma aha in dhammaan isticmaalayaashu ay ka tirtiri karaan daroogada isla sidaas. Isticmaalayaasha qaarkood ayaa laga yaabaa inay baabi'iyaan xayawaanka iyo zuclomiphene isomers ka dhakhso badan celcelis ahaan (illaa lix asbuuc), halka kuwo kale ay weli ku leeyihiin zuclomiphene wareegga wareegga wareega lixda toddobaad. Kala duwanaansho dhexdhexaad ah ee ka dhexjira xawaaraha tirakoobka ee clomiphene waxaa lagu sharxi karaa isbeddelada sida isirada shakhsiga, qiyaasta, iyo muddada maamulka.
Laba gabdhood ayaa sidoo kale, isla mar ahaanteed, inay diyaargaroobaan 50 mg clomiphene shan maalmood oo isdaba-mar ah oo ay hore u maraan wareegga bakeeriga. Si kastaba ha ahaatee, hal qof ayaa isticmaali kara daroogada si ka dhakhso badan kan kale. Waxay ku xiran tahay awoodda jirka ee shakhsiyaadka. Isticmaalayaasha qaarkood, daroogadu waxay joogi kartaa firfircoonida muddo dheer halka kuwa kale, daroogadu waxay noqon doontaa mid ciyaal ah muddo gaaban.
Genetics: Suugaanta bukaanka ayaa soo jeedinaysa in cirifiriinadu ay ka dhacayso dheef-shiid kiimikaad hoose oo xoog leh. Inkastoo wadooyinka habdhiska jirka ee saxda ah ee looga jawaabi karo dheef-shiid kiimikaadeeda aan la caddaynin, hal channel ayaa rumaysan yahay inuu door weyn ka ciyaari karo waa CYP2D6 (cytochrom P450 2D6).
Inta badan daawooyinka haddii aysan dhammaantood helin waxtarkooda iyo hoos udhaca ayadoo ku xiran sida aad u isticmaasho. Tusaale ahaan, haddii si khaldan loo isticmaalo, ama haddii ay ka badan tahay, Clomid waxay dadka isticmaali kartaa khatarta ah inay yeeshaan saameyno kala duwan. Hase yeeshee, waxaa jira qaar Dhibaatooyinka dhinaca saameeya taas oo ah mid caadi ah waxayna ku baaba'aysaa waqti gaaban. Dhinaca kale, waxaa laga yaabaa in aad dareento waxyeelo aad u daran markaa marka aad qaadato qiyaasta ka sareysa inta uu dhakhtarku kuu qoray. Dhibaatooyinka soo noqnoqda ee ka dhexeeya isticmaaleyaasha Clomid waxaa ka mid ah;
Naas-nuujinta, xanuun, iyo raaxo la'aan
Dhiigga xubinta taranka iyo uurka
Ovarian Hypermimulation Syndrome
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira waxyeelo daran, laakiin waxay ku dhacaan oo kaliya waxay ku xiran yihiin sida aad u qaadato daroogada. Taa bedelkeeda, habka bini-aadannimada ayaa sidoo kale ah mid muhiim u ah waxa aad la kulantid ka dib markaad qaadato Clomid. Dadka qaarkood waxay la kulmi doonaan dhibaatooyinka daran ee xitaa haddii ay qaataan qiyaasta daawada loo qoray ama ka hooseeya. Taasi waa sababta aan mar walba ugala talinno macaamiisheena in ay maraan baaritaan caafimaad inta aysan bilaabin qaadashada daawadan. Haddii aad la kulantid mid ka mid ah saameynahan, waa inaad raadsataa daaweyn degdeg ah;
Neefsasho aan lahayn
Sidoo kale waa inaad ogaataa in haddii ay wax khaldan yihiin, Clomid wuxuu u horseedi karaa uurooyin badan. Waxaa jira fursad weyn oo aad uur qaadi kartid marka aad isticmaaleysid sheygan, oo ku saabsan 7% waxaad heli doontaa laba mataano iyo 0.5% fursad aad ku heli doonto saddex laab ama amarro sare. Waa muhiim in aad marka hore la hadasho dhakhtarkaaga, kala hadasho khatarta, iyo sidoo kale go'aamiso haddii aad ku haboon tahay inaad qaaddo mataano ama dhufto. Haddii aadan diyaar u ahayn inaad uur yeelatid, waxaa haboon in aad la socoto kormeer dhow.
Ka hor inta aanad isticmaalin Clomid, hubso inaadan xasaasiyad ku ahayn ama aad u culus tahay mid kasta oo ka mid ah maaddooyinka. Waxaad marka hore la hadli kartaa dhakhtarkaaga oo u sheeg khabiirka kugula talin doona haddii aad ku haboon tahay inaad isticmaasho. Habkan, waxaad iska ilaalin kartaa inaad iska dhigto khatarta inaad hesho mid ka mid ah dhibaatooyinka soo raaca. Sidoo kale, hubso in aad raacdo qiyaasta lagu taliyey.
Dumarka isticmaalaya sheygan si sax ah oo aan aheyn mid aan loo dulqaadan karin, waxaa jira faa'iidooyin fara badan oo laga filayo in la filo. Iska hubso inaad takhtarkaaga ku lug yeelatid ka hor, inta lagu jiro, iyo kadib markaad dhameeysid qiyaasta Clomid si aad ugu raaxaysato Dheefaha Clomid. Clomid waxay bixisaa faa'iidooyin kala duwan oo loogu talagalay dadka isticmaala kuwaas oo ah sida soo socota;
Waa kharashka waxtarka leh - tani waxay ka mid tahay hababka ugu awoodda badan ee lagu daweeyo dhalmo la'aanta. Kharashka Clomid marka la barbardhigo tallaabooyinka kale sida IVF waa mid aan caadi ahayn. Waxay u muuqatay in ay nolol badbaadiye u tahay shakhsiyaadka la tacaalaya arrimaha dhalmo la'aanta, laakiin ma haystaan ​​daaweyn ay ugu wacan tahay lacag yaraanta. Natiijooyinka ay isticmaalaan waxay ka badan yihiin qiimaha lacagta la qaatay.
Waa dawo afka ah - dawo afka ah way fududahay waxayna keenaysaa xanuunka ugu yar. Tani way ka duwan tahay irbadaha halkaasoo isticmaaluhu isticmaali karaan cirbadaha jirka oo dhan, taas oo noqon karta mid aad u kacsan. Clomid waa mid ka mid ah daaweynta infertility yar oo haweenka ka badbaadiya dhibaatooyinkaas.
Daryeel-bixiyeha asaasiga ah ayaa kuu qori kara - warka wanaagsani waa inaadan u baahnayn inaad booqato takhasuska taranka si aad u hesho daawada Clomid. Tani waxay kor u qaadaysaa roonaanta, gaar ahaan haddii aadan ogeyn wax khabiir ah oo ku takhasusay taranka. Waa wakhti badbaadiye, qaybta ugu wanaagsani waxay tahay inay ammaan tahay isticmaalka haddii aad raacdo jihada lagu taliyey ee isticmaalka.
Dhibaatooyin dhowr ah oo soo raaca - haddii loo isticmaalo si sax ah, Clomid wax yar ma laha wax saameyn ah. Haddii aad heshid, waxay yihiin kuwa kaliya kuwa fudud kuwaas oo tagi doona gaaban markaad joojiso isticmaalka ama marka jirkaaga la isticmaalo saameynta. Sidoo kale, xasuuso inaad ka iibsato daroogada ka soo saaraha sheyga ama alaab-qeybiyaha si loo hubiyo inaad hesho alaab tayo leh natiijooyinka Clomid.
Dib u eegisyada Clomid
Waxyaabahani waxay heleen dib-u-eegis wanaagsan iyo qiimeyno kuwii hore u adeegsaday. Qaar badan oo ka mid ah kuwa isticmaalaa waxay sheegeen in ay si dhaqso ah u soo mareen Natiijooyinka Clomid, waxayna la yaabeen sida wax soo saarkooda jidhkooda uga jawaabeen. Dumarka intooda badani waxay sheegeen in ay seegeen waqtigoodii halka kuwa kale ay heleen wareegyo aan caadi ahayn oo aaney uur qaadan karin, laakiin waxay ahayd ilaa ay ka ogaadeen dawadan fantastik ah. Sidoo kale, badankoodu waxay heleen natiijooyin saddex bilood gudahood ka dib isticmaalka.
Qaar ka mid ah waxay ka cabanayeen madax-xanuun, lalabbo, shuban iyo matag laakiin intooda badani waxay qirteen in ay daaweyn jireen daroogada iyo saameynta daawadu ay istaagtay ka dib markii ay saxaan isticmaalka. Dhinaca kale, inta badan dadka isticmaala cabashada khibrad xun ee Clomid ayaa qirtay in ay isticmaalaan daroogada iyaga oo aan baaritaan caafimaad sameynin. Waa wax caadi ah in alaabada daawooyinka si ay u helaan jawaab celin isku dhafan iyo dib u eegisyo ka yimaada isticmaaleyaasha kala duwan. Guud ahaan, Clomid waa dawo aad u fiican oo lagu daaweeyo kiisaska dhalmo la'aanta ee haweenka. Qaybta fiicani waa in aadan u baahnayn inaad qaadato duritaan joogto ah maaddaama ay tahay daroogo afka ah. Waxaad sidoo kale bilaabi kartaa natiijooyinka mudo gaaban xiitaa qaar ka mid ah dadka isticmaala waxay soo sheegaan uur qaadidda kadib seddex bilood oo qiyaas ah.
Tilmaame Hagid ah oo loogu talagalay testosterone decanoate for Bodybuilding(Wuxuu furan yahay tabare cusub oo cusub)
Hadda dhakhtarkaagu kugula darey daawada laguu qoray, waa caadi inaad dareento farxad iyo aad uga mashquuliso inaad isku daydo. Tani waxay kuu horseedi kartaa inaad ka soo iibsato iibiyaha ugu horeeya ee yimaada habka, taasina waa qalad weyn. Haddii aad rabto in aad soo iibsato Clomid, waa inaad ka taxadartaa inaad hubiso in aad ka heshay kalsooni Bixiyaha qalabka iyo inaanad ku dhicin xadhig. Waxaa jira baahida loo qabo badeecadan, taasoo keentay kororka tirada alaab-qeybiyeyaasha soo koraya oo dalbanaya iibinta. Haddii aadan taxaddar ku filan, waxaad dhumin doontaa inaad lacag badan ku bixiso lacagtaada wax aan ku siin karin natiijooyinka aad raadineyso. Sidoo kale, waa laga yaabaa inaad Soo iibso budada kabadhada taasi maaha mid ammaan ah, taas oo kuu keeni doonta saameyn xun iyo xanuun marka loo eego inaad horeyba ula macaamileysid.
Waqtigaaga qaado oo raadso alaab-bixiye Clomid oo aad ku kalsoon tahay. Iibsiga Clomid online wuxuu ku siinayaa soo-gaadhista aad u baahan tahay si aad u hesho midda saxda ah. Hubi dib u eegida internetka iyo arag dadka kale ee soo iibsaday alaabta ka soo iibsadahaas gaarka ah waxay ku yiraahdaan alaabta. Waxaad sidoo kale ku siin kartaa talooyin ka socda asxaabta ama qaraabada inaad ogtahay inaad isticmaashay alaabtan ka hor iyo in ay kuu gudbiyaan alaab-qeybiyaha ay jecel yihiin. Qiimaha sidoo kale waa mid go'aaminaya markaad raadineyso Iskuxidhka iibka haddii aan caymiskaaga caymisku daboolin kharashka. Waa inaadan u ogolaan naftaada in aad ka badato, laakiin halkii aad samayn lahayd cilmi-baaris, faham qiimaha celceliska suuqyada iyo iibso iibiyaha qiimaha ugu macquulsan.
Daawooyinka waa arrin xasaasi ah, waana inaad ku daaweysaa culeyska ugu weyn. Ha ku degdegin dhiirrigelinta ugu horeysa ee yimaada habkaada, lakiin halkii aad raadin lahayd tayada. Warka wanaagsani waa in aan hadda kudiyeynayno bixiyaha ugu fiican gobolka. Waxaad si sahlan u dalban kartaa adoo adeegsanaya casrigaaga, waxaanna kuugu soo gudbin doonaa albaabkaada. Qiimaha Our sidoo kale waa mid macquul ah, oo aad awoodid iibso Clomid in badan ka eeg boggeena internetka. Na soo wac wakhti kasta oo aad qabtid su'aalo ama aad u baahan tahay gargaar aad ku sameyneyso amarkaaga. Qadka taleefankayagu waa furan yahay 24 / 7.
Isku dhejinta si loo daaweeyo dhalmo la'aanta dheddig-(Guud)
Clomid ayaa loo xaqiijiyay in uu noqdo mid aad u fiican marka ay timaado daaweynta dhibaatooyinka bacriminta ee haweenka. Waxay ka shaqeysaa iyada oo jidhku ka fekerayo in heerka qiyaasta estrogen-ka uu ka hooseeyo sida dhabta ah, taasoo dib u dhigaysa qanjirka pituitary si loo kordhiyo heerka hoormoonka kicinta ee follicles. Tani waxay kicinaysaa ugxan-yari si ay u soo saarto ugxan ama maqaarku, dabadeed isticmaalka ayaa markaa uur u yeelan kara waqtiga uurka. Waa mabda'a toosan, daroogadu waxay u shaqaysay shaqsiyaad badan oo qaatay wakhti ay ku raadiyaan calaamadda Clomid (50-41-9) waxayna u adeegsadeen sida ay tahay. Haddii aad la kulantid dhibaatooyin la xiriira bacriminta, isku day in aad maalgeliso badeecadan oo aad ku raaxeyso natiijooyinka.
Si kastaba ha noqotee, hubso inaad dhakhtarkaaga ku darayso geeddi-socodka qiyaasta dhan ee natiijooyinka ugu sarreeya. Ha ka waaban inaad u sheegto daawadaada haddii aad la kulanto waxyeelooyin kale oo sareeya ama haddii aad xasaasiyad ku leedahay walxo kasta oo daroogada ah. Sidoo kale, wac jimicsigaaga haddii ay dhacdo inaad la kulanto waxyeelo daran ka hor inta xaaladdu ka sii darayso.
Joham, AE, Teede, HJ, Ranasinha, S., Zoungas, S., & Boyle, J. (2015). Ka hortagga dhalmo la'aanta iyo isticmaalka daaweynta bacriminta ee haweenka qaba xanuunka ugxan-yare ee ugxan-yarta ah: xogta laga helay daraasad dadweyne oo badan. Wargeyska caafimaadka dumarka, 24(4), 299-307.
Berger, MH, Messore, M., Pastuszak, AW, & Ramasamy, R. (2016). Xidhiidhka u dhexeeya dhalmo la'aanta iyo kufsiga jinsiga ee ragga iyo haweenka. Dib u eegida daawada galmada, 4(4), 353-365.